Iindaba-Joyina iHigg Index
Joyina i-Index ye-Higg
Iphuhliswe nguMbutho weZambatho eziZinzileyo, i-Higg Index siseti yezixhobo ezenza iimveliso, abathengisi, kunye nezixhobo zabo bonke ubungakanani- kuwo onke amabakala kuhambo lwabo lokuzinza - ukulinganisa ngokuchanekileyo kunye nokufumana amanqaku kwinkqubela phambili yemveliso. I-Index ye-Higg ihambisa isishwankathelo esipheleleyo esixhobisa amashishini ukuba enze uphuculo olunentsingiselo olukhusela intlalontle yabasebenzi basefektri, abahlali bendawo kunye nokusingqongileyo.
Izixhobo zeHigg Facility zilinganisa ifuthe lokuzinza kokusingqongileyo nakwintlalo kumaziko okuvelisa kwihlabathi liphela. Zimbini izixhobo zeHigg Facility: Imodyuli yeHigg yeZiko lokusiNgqongileyo (iHigg FEM) kunye neModyuli yezeNtlalontle yoLuntu kunye nezaBasebenzi (iHigg FSLM).
Ukubekwa emgangathweni komGangatho weMpembelelo yezeNtlalo kunye neNdalo esingqongileyo kumaziko
Izambatho, izihlangu, kunye nemveliso yamalaphu kwenzeka kumawakawaka amaziko kwihlabathi liphela. Isibonelelo ngasinye sidlala indima ebalulekileyo kuzinzo jikelele lweshishini. Izixhobo zeHigg Facility zibonelela ngovavanyo olusemgangathweni lwentlalo kunye nokusingqongileyo olwenza ukuba incoko ibekho phakathi kwamaqabane etyathanga lexabiso ekuphuculeni ngokwentlalo nangokusingqongileyo onke amanqanaba kwikhonkco lexabiso lehlabathi.
Imodyuli yeHigg yokuSingqongileyo
Iindleko zokusingqongileyo zokuvelisa nokunxiba iimpahla ziphezulu. Ukwenza iibini eziqhelekileyo zejee kunokufuna phantse iilitha ezingama-2 000 zamanzi kunye neemegajoules ezingama-400 zamandla. Nje ukuba uthenge, ukukhathalela kwa loo jean inye ebomini bayo bonke kunokukhupha ngaphezulu kweekhilogram ezingama-30 zecarbon dioxide. Oko kulingana nokuqhuba imoto iimayile ezingama-78.
Imodyuli yeHigg yeNdawo yokusiNgqongileyo (i-Higg FEM) yazisa abavelisi, iimveliso kunye nabathengisi malunga nokusebenza kwendalo kwizibonelelo zabo, ukubanika amandla okulinganisa ukuphuculwa kozinzo.
IHigg FEM ibonelela ngezixhobo umfanekiso ocacileyo wempembelelo yazo kwindalo esingqongileyo. Iyabanceda bachonge kwaye babeke phambili amathuba okuphucula ukusebenza.
Isibonelelo seHigg seNtlalontle kunye neModyuli yabasebenzi
Wonke umntu kufanelekile ukusebenza kwindawo ekhuselekileyo nesempilweni apho afumana khona umvuzo ofanelekileyo. Ukuphucula iimeko zentlalo nezabasebenzi kubasebenzi abavelisa iibhiliyoni zeengubo, amalaphu kunye nezihlangu unyaka nonyaka, iimveliso kunye nabavelisi kufuneka baqale balinganise ifuthe lezentlalo kumaziko ehlabathi.
IZiko leMfundo laseHigg leModyuli (iHigg FSLM) ikhuthaza iimeko ezikhuselekileyo nezingakhethi cala kwezentlalo nezabasebenzi kubasebenzi beentengo kwihlabathi liphela. Izixhobo zinokusebenzisa uvavanyo olunamanqaku ukuqonda iindawo ekuhlalwa kuzo kunye nokunciphisa ukudinwa. Endaweni yokugxila ekuthobeleni, banokuchitha ixesha kunye nezixhobo ekwenzeni iinguqu zenkqubo ehlala ihleli.
Qhubeka nokujoyina i-HIGG ukufezekisa kuvavanyo lokuziqhelanisa nokwenza ukuba inkampani ivavanye iintlobo zezinto ezibonakalayo, iimveliso, izityalo zokuvelisa kunye neenkqubo zenkqubo ngaphakathi kwemeko yokhetho lokusingqongileyo kunye nemveliso.
Isalathiso se-HIGG sisixhobo esisemgangathweni sokunika ingxelo esisetyenziswa ngabenzi abangaphezulu kwama-8,000 kunye neempawu ezili-150 kwihlabathi liphela. Isusa isidingo sokuphinda-phinda ukuzivavanya kwaye inceda ekuchongeni amathuba okuphucula ukusebenza.
Ixesha Post: Apr-05-2020